Scams & Nchekwa - Bụrụ Onye Na-eme Ihe Ọjọọ na Ọka Mmiri
Intanet jupụtara mmadụ dị iche iche na ọtụtụ ebumnuche. Dị ka ọtụtụ ndị setịpụrụelu na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ, ndị ọzọ na-etinye oge ha n'inweta ụzọ iji rụọ ọrụ iwu ha. Mgbe anyị na-eme weebụsaịtị,anyị na-elekwasị anya na nnyefe ọrụ anyị yana ahụmahụ nke onye ọrụ na-eche ka ha na-eji saịtị gị. Imirikiti atụmatụ mmepe weebụgụnyere mgbasa ozi ịntanetị na atụmatụ ndị dị ka Search Engine Optimization (SEO), UX mmepe yana ịzụlite ọdịnayaụlọ dịka mmepe weebụ - best temperature monitoring.
Ngwá ọrụ nke ndị na-agba ọsọ mbanye na-aga n'ihu, ha na-adịwanye mmasite na nsụgharị ndị gara aga ka oge na-agafe. Ọ dị mkpa ka ị mara na ụzọ ndị eji eji eji eji eji ejiji eme ihe yana usoro ndị ọzọ nke na-enye akaihe egwu nke ịntanetị. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị aghụghọ na-agbagharị gburugburu ọrụ ndị omempụna scammers.
Ọ dị mkpa ịmụta ụfọdụ n'ime ọgụ ndị a ma nọrọ na nchebe ha.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,kọwakwuo banyere ọgụ ndị aghụghọ na-emekarị.
Mpụ a na-agụnye izipu ozi na ozi ịntanetị nke atụmatụ ha adịghị mma.Ndị na-eme ihe nkiri na-eji usoro ndị dị ka phishing ma ọ bụ ọgụ na-atụgharị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị ọrụ scammers na-eji njikọ ndị nwere ike emerụma ọ bụ jiri nje. Ha nwere ike izipu Mgbakwụnye nwere Trojans. Mgbe ha meghere ha, ha nwere ike ibunye ihe nchọgharị gị ma zụọ ọtụtụ nzaba njirimarana ozi nkeonwe ndị ọzọ. Ọ dị mkpa iji nzacha spam dị elu nakwa dịka iji onye na-eweta email echekwara..Gbaa mbọ hụ na okwuntughe gịdị ike na plugins na-adị n'oge.
Mwakpo dị otú a na-eji ohere ịnweta ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị isi. Ụfọdụweebụsaịtị ndị koodu bụ PHP nwere SQL vulnerability. Ụfọdụ n'ime ọdụ data nwere ike ịnweta ngwa ngwa site n'iji usoro hacking a. Ọzọkwa, SQLogwu nwere ike ikwe ka onye hacker gụọ ihe niile dị na ihe nkesa na ogidi na ahịrị. Nke a nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ ghara ịnwe.Ụfọdụ n'ime ihe ọmụma nke nwere ike ịdaba n'ụzọ dị otú a gụnyere ozi kaadị akwụmụgwọ.
Mwakpo a na-eweta ụfọdụ n'ime aghụghọ aghụghọ nke internet. XSS na-eji yaederede ederede iji na-agba akwụkwọ edemede na ebe nrụọrụ weebụ dị iche. N'adịghị ka ọgụ botnet, XSS nwere ohere ịnweta nchekwa data na-eme ọhụụ nchọgharị niilena-agba ọsọ. Ndị ohi nwere ike ịzụta ozi kaadị akwụmụgwọ site na XSS. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ nwere ike imebi nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ site na hackingya. Ọzọkwa, mgbalị SEO apụghị ịmị mkpụrụ na saịtị nke search engines na-eche na enweghị nchebe.
Ịntanetị jupụtara n'ọtụtụ nsogbu na nsogbu. Ọzọkwa, e nwere dị iche icheebumnuche na ebumnobi na-akpata ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị. Imirikiti ụlọ ọrụ weebụ na-eme n'enweghị ndị na-agba ọsọ na ịntanetị. N'ihi ya, atweaking nke atụmatụ weebụ na-elekwasị anya na ịmepụta nnyefe ọrụ na arụmọrụ nke ịzụta saịtị ahụ nke ọma. Otú ọ dị, e nwerentakịrị ihe iji gbochie ndị omempụ. Ị nwere ike ịhapụ ịntanetị n'iji ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị dị na ntụziaka a. Ọzọkwa, i nwere ikeweghachi nche nke ahụmahụ nchọgharị gị yana ihe ndị ọzọ na-emetụta nchekwa nke ndị ahịa gị.